Maxaa ugu wacan in malaayiin qof ay sidan ugu arkaan Koobka Adduunka? - Worldnews.com
12 qof oo rag
“Beer nugaylka xulka qaranka Denmark”
Cayaartooyda dalka Denmark ee ku sugan dalka Ruushka ayaa diyaarad gaar ah u kireeyay cayaaryahanaka difaaca uga dheela kooxdaasi si uu soo arko canug dhawaan uga dhashay...
Dhanjafku waa nooc madax xanuun oo qayb ka mid ah madaxa si gaar ah uu qofku u xanuuno. Xanuunkanna wuxuu ku badan yahay dumarka iyada oo cilmi baadhis cudurkan lagu...
Barcelona ayaa xalay taariikh cusub ka samaysay Horyaalka Yurub ee Champions League iyada oo noqotay kooxdii u horaysay ee ka soo kabata ciyaar is aragii koobaad lagaga...
Dumarka madow ee midabka furan iyo masraxyada!
Rihanna, Beyonce, Cardi B, Stefflon Don, Maya Jama, Mabel, Zendaya iyo Adwoa Aboah ayaa ka mid ah gabdhaha dhinaca madadaalada caalamka ugu horreeya sanadkan 2018. Balse...
Halkee baan ka arki karaa dayax madoobaadka ugu dheer qarniga 21aad?
Dayax madoobaadka wuxuu dhici doonaa 27 Luulyo 2018, waana mid aan hore u dhicin. Wuxuu noqon doonaa dayax madoobaadkii ugu dheeraa qarniga 21aad, sida ay sheegayso...
Dayax madoobaadka wuxuu dhici doonaa 27 Luulyo 2018, waana mid aan hore u dhicin. Wuxuu noqon doonaa dayax madoobaadkii ugu dheeraa qarniga 21aad, sida ay sheegayso hay'adda hawada sare u qaabilsan Maraykanka (NASA). Haddii aad nasiib badan tahay, waxaad daawan doontaa hal saac iyo 43 daqiiqo oo dayax madoobaadkaas uu socon doono. Waa maxay dayax madoobaad? Dayax madoobaad...
Jamhuuriyadda Ireland ayaa ku guuldarraysatay in ay ka qayb gasho Koobka Adduunka ka dib markii saddex gool oo uu dhaliyay Christian Eriksen ay Denmark u suuragalisay in ay guul muhiim ah ka gaarto ciyaartii isku celiska ahayd ee loogu soo baxayay Koobka Adduunka ee Ruushka ka dhacaya sannadka fooda inagu soo haya ee 2018ka. Kulankii hore ee ay labadan kooxood yeesheen ayaa ku...
Ciyaaryahanka weyn ee Francesco Totti ayaa ilmeeyay kaddib markii uu hadal ka jeediyay ciyaartii ugu dambaysay ee uu kooxdiisa Roma u dheelay kaddib 25 sano oo uu kooxdaasi u ciyaarayay. 40-jirkan weerarka ka dheela ayaa naadiga kaliya ee uu u dheelay ee Roma waxa uu u dhaliyay 307 gool 786 kulan oo uu u saftay. Ciyaarta ayuu badel ku soo galay daqiiqaddii 54-aad, iyadoo...
Xilli ciyaartoyda ay si weyn u dabaaldegeen kaddib markii ay 4-0 uga badiyeen koxoda ENPPI, ayuu hareeraha eegay tababare Saciid Al Shesheni waxa uuna ogaaday in xubin ka mid ah ciyaartoyda ay da'dooda ka yar tahay 16-ka sano ee kooxda Al-Mokawloon uusan ku faraxsanayn tartanka ka soconaayo Qaahira. Ciyaartoygaasi ayaa ka niyad jabay in magaciisa uusan ku jirin ciyaartoyda...
Kaamiro lagu arki karo gudaha jirka bini’aadamka oo lasoo saaray
Seeynisyahano ayaa soo saaray qalab cusub oo kaamiro ah taasi oo lagu arki karo waxa ku jira gudaha jirka bini'daamka, waxaana loogu talogalay in loo isticmaalo sababo caafimaad. Kaamiradan ayaa waxaa lagu rakibay illeysyo iyo diirado sahlaya in la arko gudaha ubucda bini'aadamka. Wixii hadda ka horeeyay, shaqaalaha caafimaadka ayaa adeegsan jirey sheeybaaro iyo raajo qaali ah...